Mhlawumbe uqaphele ukungahambisani okungaqondakali kwezinombolo, okunikeza inhlanganisela engavamile yezinsuku, izinyanga neminyaka? Uma kungenjalo, ngokuqinisekile uzomangala uma ufunda ukuthi le milingo yenombolo iye yahlala iminyaka eyishumi nambili. Ukuqala kombukiso wezibalo ezifanayo kwafakwa ngoJanuwari 1, 2001. Isiqephu sokugcina sokugcina sizoba ngoDisemba 12, 2012. Isikhathi ngasinye sezinombolo sithembisa ukufezwa kwezenzakalo ezibalulekile ezinhlobonhlobo. Kusukela ngosuku 07.07.07 olulindeleke izenzakalo ezibalulekile, 06.06.06. babesaba, futhi ngo-09/09/09 bekufanele kulethe inhlanhla eningi. Akunakwenzeka ukusho ngokucacile ukuthi izibikezelo zigcwalisile noma cha. Wonke umuntu uzothola impendulo yalo mbuzo. Kwabanye, balethe injabulo esilindelwe isikhathi eside, futhi kumuntu - ukudumazeka kuphela.
Ngakho, ukungahambisani kokugcina "okujabulisayo" kwezinombolo ku-12.12.12. Ngabe lolu suku olungavamile luzosiletha kanjani?
Ukubalwa kwezinombolo 12.12.12
Into yokuqala ethatha iso lakho yi-nine, etholakala ngokufaka izibalo ezilula zezibalo. Uma sihlanganisa zonke izinombolo zalolu suku1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2, sithola le namba ngqo. Njengoba wazi, lezi zinsuku eziyisishiyagalolunye, ezinkulu kunazo zonke izinombolo zokuqala, uphawu lwendlela yonke impumelelo. Ukuba yi-multiple of 3, iphenduka ukungafinyeleli ekuthandeni.
Kodwa inombolo yi-12.12.12. ebhaliwe kahle, kanye nencazelo ejulile yalolu suku, kuzokwazi ukuthola ngokufingqa izinombolo ngo 12/12/2012. Akubukeka kuhle kangaka, kepha lunikeza ulwazi ngezinga elibanzi lomhlaba wonke. Manje inani lazo zonke izinombolo alinikezi 9, kodwa 11. Le nombolo, kanye nenombolo 22, ayikwazi ukulethwa kwinombolo yokuqala. Kubonakala kuphela kuleli fomu futhi ngokuvumelana nemikhuba yamanani ebizwa ngokuthi "Master-Number."
Inombolo 11 ithi ngalolo suku amanye amathalenta afihliwe azovela kubantu, abangazange bazi ngakho. Ukufundiswa okwandisiwe kanye nekhono lokubona kusengaphambili lutho.Lokhu kuzovumela ukubukeka okusha empilweni yakho nasemhlabeni wonke.
Kusukela kulolu suku, ukutholakala okusha kulindeleke emkhakheni wesayensi, iziprofetho ezintsha, izinto ezintsha. Lokhu kutholakala kuzothinta ukuthuthukiswa kwaso sonke isintu, hhayi nje abantu ngabanye.
Futhi inombolo 11 ifanekisela ukucatshangwa ngabakhethiweyo bomthwalo omkhulu ngekusasa lenani elikhulu labantu. Kulolu suku, kungenzeka ukuphetha izinkontileka ezibalulekile futhi wenze izinqumo ezingeni likahulumeni noma emhlabeni. Imiphumela yabo ingahluka. Kuyaziwa ukuthi bazosusa ngokushesha ukusabela kwabantu. Kungakhathaliseki ukuthi kuyinto engalungile noma enhle, isikhathi sizoxoxa.
Futhi, usuku oluyi-12.12.12 lungabangela ukuqhutshwa komsebenzi we-paranormal. Isibonelo, kukhona imilayezo evela kubantu mayelana nokubona kwe-UFOs, izakhi ezivela ezweni elifanayo, njll. Abantu abaningi bangase bacabange ngalezi zindaba njengenganekwane yabantu abanokwethenjelwa. Kunoma yikuphi, wonke umuntu unquma ukuthi yini okufanele abe yiqiniso.
Uma ukhethe umshado ngalolo suku, qaphela ukuthi ukuthandana kwezimbangi ezinjalo kuzophumelela ngaphezu kokusebenza. Lokhu kungabangela ubunzima emva komshado. Ngokushesha noma ngemva kwesikhathi isimo sengqondo sothando sishabalale, futhi abantu bangakwazi ukubona ngokungazelelwe ukuthi abanokuncane okufanayo futhi ngaphandle kwesitembu epasipoti yabo abangaxhunyiwe lutho.
Ngokusho kwesinye isiko lezinombolo, uma uletha usuku oluyi-12.12.2012 enombolweni enkulu, sithola inombolo 2. Inencazelo ehlukile futhi ayithembisi izenzakalo ezibalulekile. Kodwa ngokuvamile i-Master Number, njengenombolo yenombolo 2, ithinta abantu ngandlela-thile.
Manje cabanga ngalolu suku kusukela ekubukeni kwezinkolelo zamanani, okungukuthi - ukubaluleka kwalolu suku e-Arcana Tarot. Lapha inombolo engu-11, ehambisana ne-12.12.12., Inencazelo engacacile. Ngokusho kwedatha eyodwa yiyona "inombolo ye-ordinal" ye-Arkan ye-Force. Amanye amasiko abonisa ukuthi uhlobene no-Arkane Justice (Justice). Incazelo ngayinye ibonisa ukuthi kungenzeka izenzakalo ezithile.
Ngakolunye uhlangothi, i-Arkan Sila iyasiza ekubhekaneni nazo zonke izinkinga eziyinkimbinkimbi futhi usebenzise usuku oluvuthiwe kakhulu. Kodwa ukuze uzuze imiphumela emihle, kuzodingeka unqobe ubunzima obuthile. Abaningi bayothola imiphumela ephezulu emsebenzini wabo, kodwa kuqala baqale ukuthuthumela.
Ngaphezu kwalokho, lifanekisela ukuthatha izinjabulo zenyama kanye namandla ezocansi. Ungazitholi izilingo, uma kungenjalo awukwazi ukugwema amaqhinga angcolile, okuvela engxenyeni yezifiso ezimbi.
Futhi, mhlawumbe kuzodingeka ulahle okuthile okubiza futhi okukhethekile ngenxa yomgomo ophakeme. Ngenxa yalokho, lokhu kuzoshintsha kakhulu impilo yakho yokuphila. Izinguquko ezinjalo ezibalulekile ngeke zibonakale ngo-12.12.12, kodwa ekuqaleni kuzobekwa ngalolo suku.
Futhi ngo-12.12.12. mhlawumbe noma yikuphi ukubonakaliswa kwemisebenzi yomphakathi - imibuthano, imibhikisho, iminyango noma imishado eminingi, ebangelwa ukungavamile kwalolu suku.
I-Arkan Justice (Ubulungisa)
Ngokusho kwe-Arcana Justice, ngalolu suku kubalulekile ukugwema izivumelwano ezilindile, njengoba zingaba nemiphumela emibi futhi ziphele enkantolo. Ngakho-ke, ngaphambi kokuba usayine noma yimaphi amaphepha, cabanga ngokucophelela ngalokho okungaholela kukho.
Uma ngaphambili ulahlekelwe ukulahleka nokulahlekelwa, khona-ke kukhona amathuba amakhulu ukuthi ngalolo suku uzothola inzuzo yezimali ngokuzumayo. Futhi uzobuyiselwa izikweletu, ungathola isinxephezelo noma izinsizakalo.
Kulolu suku, abaningi bayoba nethuba lokuveza imibono yabo ngokukhululekile. Uhulumeni ngeke aphuze ngokutholwa kwezinqumo okumele zibonise ngandlela-thile ukuthi zisebenza kuphela kubantu.
Abanye abantu abangasekeli imibono yeningi bangakwazi "ukuhlubuka" ukufakazela ilungelo labo lokuzimela nokuzikhethela. Mhlawumbe ukubonakaliswa kokuhlukunyezwa nokunganeliseki ekuphenduleni ezinye izinqumo zikahulumeni ezingalungisi isinqumo sabo.
Lezi zenzakalo ezinhle futhi ezingenjalo kakhulu kanye nezinguquko empilweni zithembisa ukuthi "ujabule" ngo-12.12.2012. Akubheki ukuthi izici ezichazwe ngezindlela ezihlukene zamanani ezinombhalo zihlukile, zifakaza ngendlela efanayo ngendlela engozini yezivumelwano ezingekho kahle, umsebenzi wezenhlalakahle nokuzibiza, ithuba lokuvula amathalenta namakhono, isidingo sokushiya okuthile ngenjongo yokuphila esikhathini esizayo .
Ngakho-ke, amasiko ahlukene akhuluma mayelana nethuba lezehlakalo ezifanayo. Ingabe kungenzekani noma usuku 12.12.12. Ngempela unomhlobo othize we "magic" futhi uzosiletha yini amatsha namathuba amasha? Kuwe. Ngakho noma ngenye indlela, isikhathi sizobeka wonke amachashazi phezu kokuthi "futhi" futhi uzinqumela wena, kubalulekile ukukhokha izibikezelo bese unikeza izinombolo ezikhethekile, mhlawumbe ngisho nencazelo ye-sacral. Kuhlala nje ukulinda ekuseni kaDisemba 13, lapho yonke into isula.
Amaqanda aqotshwe ngamazwe
Amakhukhi nge-chips chips
«Amafomethi amasha wokukhangisa». I-seminar yamahhala i-WP Media, eSt. Petersburg
I-Perkal - iyini le nto (ukwakheka kanye nekhwalithi). Yini engcono embhedeni wembhedeni: i-percale, i-satin noma i-poplin?
I-pizza ene-cartoonised anyanisi ne-fennel
U-Ksenia Sobchak wenqabe ukuphendula umbuzo mayelana ne "gadies", ividiyo
Amafutha omnqumo anamafutha
Ukuphulukisa izindawo ze-ash ash
Indlela yokuvimbela ukuphuma esikhathini sokuqala